မေးကြည့်ချင်တယ်.. | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
ညီမတို့ကတော့ အမရေးတဲ့ စာတိုပေစတွေကိုပဲ ဖတ်ရတာကြိုက်လို့ ပုံမှန်လာဖတ်ဖြစ်နေပြီ။
နှစ်ရက်တောင်ပျောက်နေတာ အမက လွမ်းနေတာကိုး။ စာရေးမယ်လို့ မိဘကမျှော်လင့်တဲ့အထဲ မပါပေမဲ့၊ သွေးထဲမှာပါလာပြီးသာဆိုတော့၊ နောက်တခါ ဒီအဖေအမေရဲ့ သမီးပြန်ဖြစ်ခွင့်ရရင်လဲ ခုလိုပဲ အဖေ့ ခြေရာနင်းမဲ့သမီးလေးလုပ်လို့ ပြောမှာပေါ့ အမရဲ့။
အမရေးတာလေးဖတ်တော့ ငယ်ငယ်ကလည်း အဲလိုအဖြစ်တွေကို သတိရမိပါတယ်။
မေမေကလည်း ကျွန်တော့်ကို စာရေးလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကို မြန်မာစာ စာစီကာကုံးကိုရေးခိုင်းရင် ကျွန်တော်ကပျင်းတော့ မရေးဘူး။ နောက်တော့ အတင်းရေးခိုင်းတော့မှ ရေးချင်တာရေးတော့တာပဲ။ ခေါင်းစဉ်ကလည်း မေမေ့စိတ်ထဲရှိတာပေးတာပဲ၊ ကျွန်တော်ကလည်း စိတ်ထဲရှိတာရေးတာပဲ။
မေမေကတော့ မန္တလေးတက္ကသိုလ် ကလောင်ရှင်အသင်းမှာ ဆရာကြီးတင်မိုး ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ဖြစ်နေတုန်းမှာ အသင်းဝင် တယောက်လို့ပြောဖူးပါတယ်။
အမရေ… သမီးရေးချင်သာရေးပါ လို့ ပြောမှာပါပဲ။
ပြောပြချင်တာလေးတွေ အားလုံးကို ရင်ထဲမှာ စုပုံထားပြီး အနားကလူတစ်ယောက်ထဲကိုမဟုတ်ဘဲ အများကို ပါပြောပြတော့ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်..။
ဟီး..ဟီး. ( နောက်တာပါ ) အဲဒီ ကဗျာကို တင်လိုက်လေ..
ဆရာတင်မိုးက ကလေးရဲ့ ၀ါသနာကို အားပေးအားမြှောက်ပြုတာ မှန်ကန်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ကျနော်ငယ်ငယ် (ခုနစ်တန်းလောက်က) အိမ်သာတွေအကြောင်းကို သဲအိမ်(မောင်နေ၀ါ)တို့ စတိုင်မျိုး ဗလာစာအုပ်ထဲမှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရေးထားတာ အစ်မတွေ တွေ့သွားတော့ ဖတ်ကြပြီး အပြတ် ဟားကြတာ၊ တဟီးဟီး၊ တဟားဟားနဲ့။ ဒီကကောင်က ရှက်လွန်းလို့ အညာစောင်ကို ခေါင်းမြီးခြုံပြီး အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေရတယ်။ အဲသည်နောက် လက်တွန့်သွားပြီး တော်တော်နဲ့ စာပြန်မရေးဖြစ်ဘူး။
မရောက်ရင်လဲ reader နဲ့ ဖတ်နေဖြစ်တယ်
အမရဲ့ အက်ဆေးလေးတွေက ဆွဲဆောင်မှု ပိုရှိတယ်ဗျ...
မြန်မာ ဘလော့ဂါ ဆိုဆိုက်တီး ထဲမှာ အမတို့ လို လူမျိုးတွေရောက် လာတော့ ဘလော့ လောက ကြီး ပိုမိုစည်ပင် လာ တာပေါ့ဗျာ
အဟဲ..... လေးချိုးကြီးကို ဖတ်ချင်သားဗျ.... လေ့လာဖူးလို့ပါ.....
အမရေးပြီး ဆရာကြီး ခေါင်းကုတ်ခဲ့တဲ့ အဲဒီလေးချိုးကိုပါ တင်ပေးပါလား။ :D ဖတ်ကြည့်ချင်တယ်၊ ဆရာကြီး ဒီလောက်တောင် ခေါင်းကုတ်တယ်ဆိုတော့ နှယ်နှယ်ရရ ကဗျာတော့ မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူး။
ကျွန်မလဲ မ လို စာစီစာကုံးက စပြီး စာရေးချင်တဲ့ ပိုးစတာပဲ… မ က ကလောင်စွမ်းထက်တဲ့ စာရေးဆရာကောင်း တယောက်ပါ…
Can u post ur poem (lay-Choe-Gyi) ?
We want to taste it.